पकवान - खुर्सानी, लसुन, सुर्मा सरोवर जात्रा, टोम यम, पटना, च
नेपाली परम्परागत खानाका परिकारहरू
ⓘ पकवान - खुर्सानी, लसुन, सुर्मा सरोवर जात्रा, टोम यम, पटना, चाडपर्व, सुजीको हलुवा, गरम मसला, आँटो, कन्ती, सिन्की ..
खाद्य पदार्थ खानेकुरा नेपाली परम्परागत खानाका परिकारहरू परिकार परिकारहरू मासुका परिकारहरू
"खुर्सानी" पीरो स्वाद हुने एक किसिमको फल हो। धेरैले खुर्सानी स्वादका लागि खाने गरेका छन्। खुर्सानीको पिरो तत्वलाई क्याप्सिसिन र त्यो वनस्पतिलाई क्याप्सिकम भनिन्छ। ग्रीक भाषाको टोक्ने वस्तु बुझाउने शब्दबाट यो नाम बनेको हो। खुर्सानीले पोर्चुगाली र स्पेनी अन्वेषकहरू मार्फत एसिया महाद्वीप छिचोलेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। खुर्सानी धेरै थरीका हुन्छन्। डल्ले, अकबरे, ज्यानमारा, जिरे आदि असाध्यै पिरो वर्गमा पर्दछन्भने पूर्वतिरका राई समुदायमा सिङ्गो राँगो पकाउँदा एउटै डल्लोले भ्याइदिने राँगे खुर्सानी पनि हुन्छ भन्ने कथन छ। अलि साना खालका खुर्सानीमा झनि, चुच्चे, घोक्रे आदि पनि छन्। सानो खुर्सानी पि ...
लसुन र हिन्दी प्रभावित क्षेत्रहरूमा लहसुन पनि भनिने यो Alliaceae परिवारमा पर्ने प्याज प्रजातिको मसला हो। यसको नजिकका अरू प्रजातिहरू प्याज, छ्यापी आदि हुन्. परापूर्वकालदेखि नै लसुन पकवान र औषधीको रूपमा प्रयोग हुदै आएको छ. लसुनका पोटिहरू मिलेर बनेको दानो यसको बिरुवाको सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने भाग हो भने पातसमेत प्रयोग हुन्छ। एक पोटि मात्र फाल्ने लसुन बाहेक अरु लसुनका दानामा धेरै पोटिहरू हुन्छन। पोटिहरू काँचो वा पकाएर खाइन्छ वा औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यसको स्वाद पर्पर्याउने हुन्छ तर जब पकाइन्छ यो केही गुलियो र स्वादिलो हुँदै जान्छ. यसको पात, जमिनमुनि रहेको काण्ड र फूल पनि खान योग्य हुन्छ ...
सुर्मा सरोवर जात्रा सुदुर पश्चिममा निकै लोकप्रिय जात्रा मध्य एक हो । दार्चुला जिल्लाको सदरमुकामबाट ४ दिन र हाल यातायातका साधन पुगेको ठाउँ लाटीनाथ गाविसबाट २ दिनको पैदल यात्रापछि खण्डेश्वरी गाविसको वार्ड नम्बर १ घाजिर गाउँमा पुग्न सकिन्छ । यस ठाउँमा परापूर्वकालदेखि नै सुर्माभवानीको मन्दिर पांङ्रजडि र विभिन्न मन्दिरहरू रहेका छन् ।
टोम यम, rtgs: टम yam, थाई: ต้มยำ) एक लाओ र थाई सूप हो, सामान्यतया यो चिंराटसंग पकाइन्छ । टोयम व्यापक रुपममा छिमेकी देशहरूमा जस्तै कम्बोडिया, ब्रुनाई, मलेशिया र सिंगापुर, र बिश्वोका अन्य देशहरूमा यो लोकप्रिय छ। शाब्दिक रूपमा टोयम बाट व्युत्पन्न भइ दुई थाई शब्दहरू: टोम र यम बनेको हो। "टोम" ले बुझाउँछ उम्लिरहेको प्रक्रिया बुझाउँछ, जबकि "यम" ले एक थाई पिरो र अमिलो सलादलाइ बुझाउँछ । वास्तवमा, टोयम विशेषता यसको तातो र विशिष्ट अमिलो स्वादसंग सुगन्धित मसला र जडीबुटी भरपुर प्रयोगमा शोरबा बनाउनु हो । शोरबा आधारभूत रूपमा ताजा सामग्री जस्तै लेमन ग्रास, काफ्फिर चूना पात, गालागाल, कागति रस, माछा सस, र च ...
पटना भारत गणराज्यको बिहार प्रान्तको राजधानी हो, प्राचीनकालमा यसलाई पाटलीपुत्र भनिन्थ्यो। आधुनिक पटना दुनियाका गिने-चुनेका ती विशेष प्रचीन नगरहरूमा एक हो जो अति प्राचीन कालदेखि आजसम्म आबाद छ। आफैंमा पनि यो शहरको एक अत्यन्तै ऐतिहासिक महत्त्व रहेको छ। ईसा पूर्व मेगास्थनीज३५० ईपू-२९० ईपूले आफ्नो भारत भ्रमण पश्चात लेखेको आफ्नो पुस्तक इंडिकामा यस नगरको उल्लेख गरेका छन। पलिबोथ्रा पाटलिपुत्रजो गंगा र अरेन्नोवास सोनभद्र-हिरण्यवाहको संगममा बसेको थियो। त्यो पुस्तकको आकलनको हिसाबबाट प्राचीन पटना पलिबोथा ९ मील १४.५ कि.मी. लामो तथा १.७५ मील २.८ कि.मी. चौडा थियो। आधुनिक पटना बिहार राज्यको राजधानी हो र गं ...
चाडपर्व भन्नाले कुनै खास दिन तथा तिथिमा विभिन्न जातजातिका तथा समुदायका मानिसहरूले विशेष पर्वको रूपमा मान्ने र विभिन्न देवदेवीहरूको पूजाआजा गरी भोज भतेर खाई नाचगान गरी रमाइलो गर्ने दिनलाई भनिन्छ । मेलापात भन्नाले धेरै मानिसहरू एकै ठाउँमा जम्मा भई मनाउने जात्रा, यात्रा तथा उत्सवहरू हुन् । जात्रा भन्नाले साधारणतया हामी देवदेवीको रथयात्रा, खटयात्रा आदिलाई भन्दछौं । त्यस्तै, परम्परा भन्नाले धेरै समयअघिदेखि चलिआएका विभिन्न किसिमका रीतिथिति, प्रचलन तथा प्रथाहरू हुन् ।
सुजीको पिठो प्रयोग गरी पकाइने एक पकवान या मिठाइ: यस पकवानको लागि आवश्यक सामग्रीहरू: चिनी पानी सुजी किसमिस र काजु घ्यु दुध पकाउने तरिका: कन्ती सुख्खा नहुन्जेल तताउने सुजीको पिठो राख्ने र गाढा पहेलो नहुन्जेल चलाउने इच्छा अनुसार किसमिस र काजु हाल्ने स्वाद अनुसार चिनी र दुध या पानी राख्ने घ्यु पग्लिएर तातो नहन्जेल तताउने कन्ती या भाँडो चुलोमा बसाल्ने पानी नसकुकन्जेल पकाइरहने।
जीरा, मरिच, ल्वाङ, धनियाँ, जाइफल, टिमुर, पिपला आदि धेरै थरीका मसलाहरू मिलाएर बनाईएको मसला बनाउने तरिका गरम मसला बनाउँदा असली दालचिनी र सुकेको खुर्सानीलाई कराइमा केहीबेर भुटेर त्यसमा धनियाँका गेडा, जिरा, मरीच, अलैँची, ल्वाङ, सुप र थोरै रायोको गेडा राखी विस्तारै चलाउँदै तताइन्छ। मसलाको बास हरक्क उठेपछित्यस मिश्रणलाई केही बेर सेलाउन दिई पछि खल र सिलौटामा पिँधेर धूलो बनाइन्छ। गरम मसलाको त्यो धूलो दुई-तीन महिना राख्न सकिन्छ। गरम मसलाको मात्रा भान्सा र पकवान अनुसार फेरिन्छ।
आँटो एक प्रकारको नेपाली खानाको एक परिकार हो। मकै, गहुँ आदीलाई जाँतो अथवा घट्टमा ढिके पिठो वा मोटो गरेर पिसेको पिठोलाई पानीमा पकाएर बनाइन्छ। यो परिकारको स्वाद भात जस्तै हुन्छ।
अर्ध गोलाकार यसको भाडोको पिधमा तिन साना अढ्याउने खुट्टा समाउने दुईकान र बीचमा खाल्डो परेको हुन्छ। यसलाई मूख्य रूपमा तरकारी पकाउनको लागि प्रोग गरे पनि कुनै कुरा तार्न या उसिन्न पनि प्रयोग गरिन्छ।यसलाई चलन्चल्तिको भाषामा कराई पनि भनिन्छ।
सिन्की मूलाबाट बनाइने नेपाली तरकारी हो । मूलाका फेदको अथवा मूलालाई किच्याएर गुन्द्रुक जस्तै खाडल वा गोल्फु, घैँटो आदिमा हालिन्छ। गुन्द्रुकभन्दा बढी अमिलो हुन्छ हुने हुनाले यसको अचार झोलिलो तिहुन खाने गरिन्छ। सिन्की पाचनको काम गर्छ अनि धेरै दिनसम्म राख्‍न सकिन्छ।